कोरोना भाइरसको त्रास सम्भवतः अब धेरै रहने छैन । यसलाई रोक्ने सम्भावित खोपहरू विश्वभर विकसित भइरहेका छन् ।
रुसी अनुसन्धान केन्द्र गमल्याया इन्स्टिच्युटले खोपको क्लिनिकल परीक्षण सकाइसकेको र यसको दर्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले रुसलाई भाइरस खोपसम्बन्धी निर्देशनहरू पालना गर्न आग्रह गरेको छ । रुसी स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुरास्काले यही अक्टोबरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध सामूहिक खोप अभियान शुरू गर्ने घोषणा गरेपछि डब्लूएचओले रूसलाई सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उत्पादन गर्ने निर्देशनहरू पालना गर्न सुझाएको हो ।
रुसले तयार पार्दै गरेको भ्याक्सिन डब्लूएचओको ६ वटा मान्यता प्राप्त खोपको सूचीमा भने परेको छैन । तीन चरणका क्लिनिकल परीक्षण पूरा गरेका र मानिसमा व्यापक परीक्षण भएका खोप डब्लूएचओको सूचीमा परेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
गत शुक्रवार अमेरिकाका प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौसीले रुस र चीनले वास्तवमै खोपको परीक्षण गरिरहेका छन् भन्नेमा आफू आशावादी रहेको जनाएका थिए । यसै वर्षको अन्त्यसम्म अमेरिकासँग सुरक्षित र प्रभावकारी खोप हुनुपर्छ भन्नेमा डा. फौसीको अडान छ ।
‘खोप हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै टाढा हुनेछ र यसलाई उपलब्ध गर्न हामी अन्य देशहरूप्रति निर्भर रहनुपर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन,’ उनले अमेरिकी सांसदहरूलाई भने । (एजेन्सीको सहयोगमा)